Go’aanka togan – Asylum – JRS Romania
Caruurta kayar 18 sano
Waxaa lagu siinayaa qaxootinimo ama ilaalin dhexdhexaad ah iyadoo kuxiran sababaha ay ku saleysantahay sheegashadaada magangalyo. Qaababkaan ilaalinta ayaa ku siin doona xuquuqo qaas ah gudaha Romania.
Maxaan qaxootinimo ku helay?
Waxaa lagu siiyay qaxootinimo Roomaaniya haddii la ogaaday inaad leedahay cabsi aasaasi ah oo ku saabsan cadaadis wadankaaga asalka ah ama wadanka aad dagantahay (hadii aad tahay dad bilaa wadan) sababta oo ah asalkaaga, diintaada, dhalashadaada, aragtida siyaasadeed, ama xaqiiqda inaad ka mid tahay koox bulsho gaar ah.
Maxaan u helay badbaado hoosaad?
Waxaa lagu siiyay badbaado hoosaad haddii la ogaaday inaadan buuxin shuruudaha loogu aqoonsado qaxooti ahaan, aad leedahay cabsi dhab ah oo lagugu soo rogi doono halis culus, sababtoo ah waxaa laguugu xukumi karaa dil ama ciqaab sidan oo kale ah. in lagu dilo, ama sababta oo ah cabsidaada jirdilka ama daaweyn kale, ama waxaad u geysaneysaa khatar culus noloshaada ama daacadaada dartood rabshado guud oo ka dhashay dagaalada hubeysan ee wadankaaga.
Difaaca ma loo helay muddo xadidan?
Waxaa lagu siiyay oggalaansho qaxooti ama badbaado hoosaad muddo aan go’an, ilaa sababaha aad u heshay badbaadin aysan mar dambe jiri doonin. Waxaad heli doontaa sharci deganaansho ku meel gaar ah, waxaadna fursad u leedahay inaad cusbooneysiiso
Waa maxay xuquuqaha iyo waajibaadka aan lahaan doono?
Guud ahaan, waxaad lahaan doontaa xuquuq iyo waajibaad la mid ah tan muwaadiniinta Roomaaniyaanka ah (marka laga reebo xaqa aad u leedahay inaad codeyso iyo xaaladaha kale ee gaarka ah). Tusaale ahaan, waad awoodi doontaa inaad shaqeysid, inaad waxbaratid, iyo kaalmada bulshada. Waa inaad sidoo kale u hogaansanaataa dhammaan waajibaadka sharci ee ay leeyihiin muwaadiniinta Roomaaniyiinta, sida bixinta canshuuraha, caymiska caafimaadka iyo qaadashada mas’uuliyadda fal kasta oo sharci darro ah.
Waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad isqorto oo aad si firfircoon uga qeybqaadato barnaamijka is dhexgalka gobolka ee loogu talagalay in lagu taageero is-dhexgalkaaga Romania. Adigu kama faa’iidaysan doontid barnaamijkan gaarka ah hadaadan is-qorin waqtiga.
Maxaan sameeyaa ka dib markaan helo magangelyo?
Isla markaaba la xiriir sarkaalka is dhexgalka iyo NGO-yada ka shaqeeya Xarunta Gobolka si aad uga wada hadashid xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga, sida aad uhesho barnaamijka is dhexgalka iyo sida loo helo taageerada.
YWaxaad ka heli doontaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan barnaamijka is dhexgalka iyo xuquuqahaaga iyo waajibaadkaaga Romania adoo booqanaya websaydhka “Romania e acasa” (https://www.romaniaeacasa.ro/) ama barta internetka ee Kormeerka Guud ee Socdaalka (http://igi.mai.gov.ro/ro/content/programul-de-integrare).
Waxa kale oo aad wado u heli kartaa macluumaadka ‘Tallaabooyinkayga Koowaad ee Romania – Tilmaanta la taaban karo’ (oo ay soo saartay Golaha Qaranka Roomaaniya ee Qaxootiga / CNRR). (http://cnrr.ro/index.php/ro/blog-ro-2/integrare/240-primii-mei-pasi-en)
Ma u safri karaa meel ka baxsan Romania?
Waad dalban kartaa dukumenti safar / baasaboor, kaas oo ay tahay inaad bixiso. Dukumintiga ayaa ku kala duwanaan doona iyadoo loo eegayo nooca ilaalinta ee aad heshay (xaaladda qaxootinimo ama ilaalin dhexdhexaad ah).
Wadamo badan oo ku yaal qaarada Yurub kuma weydiistaan qaxootiga fiiso. Si kastaba ha noqotee, inta badan wadamada Yurub waxay u baahan yihiin shakhsiyaad ilaalin kaaba si ay u qabtaan fiiso. Xitaa xaaladaha marka aan lagaa rabin fiisaha, waxaa laga yaabaa inaad u hoggaansato shuruudaha kale ee gelitaanka waddan gaar ah.
Kahor safarka, marwalba ka hubso safaaradda wadanka aad rabto inaad u safarto ama ku gudubto waa maxay shuruudaha galitaanka, si looga fogaado xaalado aan fiicneyn!
Ma u keeni karaa qoyskayga Romania?
Haddii lagaa soocay xubnaha qoyskaaga, waxay kugula biirayaan Roomaaniya xaaladaha gaarka ah. Waxaa jira laba nidaam oo kala duwan oo kaa caawin kara qaxootiga iyo dadka leh kaalmada hoosaadka inay dib ula midoobaan qoysaskooda markii ay magangalyo ka helaan Romania. Nidaam kasta wuxuu leeyahay shuruudo gaar ah.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan nidaamyadaan buug-yaraha ay soo saareen Golaha Qaranka Roomaaniya ee Qaxootiga (CNRR), oo laga heli karo HALKAN. (http://cnrr.ro/index.php/ro/blog-ro-2/integrare/238-brosura-privind-reunificarea-si-reintregirea-familiei-en) Wixii talo bixin ah, fadlan kala xiriir CNRRR.
Haa, waxaad xaq u leedahay inaad ka doodo go’aanka maxkamadda haddii aad u aragto inaad heshay qaxootinimo ku saleysan sheegashadaada magangalyo.
Talaabooyinka iyo waqtiga loo qabtay ayaa la mid ah kuwa loogu dacwoodo go’aan diidmo ah (eeg kor). Maxkamaddu waxay go’aansan kartaa inay: sii waddo ilaalinta kabista ah; ku siiyo qaxooti; ama ku siin maayo nooc ka mid ah ilaalinta. Waxaad sii ahaan doontaa magangalyo-doon ilaa inta maxkamaddu ka dhammaanayso. Waa muhiim inaad la xiriirto la-taliye sharci si aad ugala hadasho xaaladdaada gaarka ah ka hor intaadan go’aan gaarin.
Habka magangalyada Romania
Qeybtan waxaa ku jira macluumaad guud oo ku saabsan magangalyada Roomaania markay tahay qof weyn
Tallaabada 1aad: Diiwaangelinta
Tallaabada 2: Wareysiga horudhaca ah
Tallaabada 3: Wareysiga
Tallaabada 4: Go’aanka